Website URL: freeexpressionmyanmar.org
Headline: မဲပေးခြင်းဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံသားတာဝန်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းဟာ သင့်ရဲ့ မဲကို လိုချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလုပ်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ဘာကတိတွေပေးထားတယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှသာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဆန္ဒမဲတွေကို ပေးသင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ကတိကဝတ်တွေကို ၎င်းတို့ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားကြပါတယ်။ တချို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ဒီမိုကရေစီအတွက် အသက်တမျှအရေးကြီးလှတဲ့ သတင်းအချက်အလက်အခွင့်အရေးကို ဖော်ဆောင်ကာကွယ်ပေးဖို့ ကတိကဝတ်တွေပေးထားကြတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၁ ခုရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးနိုင်ဖို့ tool တစ်ခုကို FEM က ဖန်တီးထားပြီး၊ ကတိကဝတ်တွေကို ကြယ်ငါးပွင့်အထိ အဆင့်သတ်မှတ်ကာ ခွဲခြားဖော်ပြထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို သိရှိပြီးမှ မဲပေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်ကြစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီအသီးသီးရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်တွေကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ဖို့ Tool ကို ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ပါ။ ပါတီတွေရဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖို့ လင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ >
မဲေပးျခင္းဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံသားတာဝန္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီတိုင္းဟာ သင့္ရဲ႕ မဲကို လိုခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ဘာကတိေတြေပးထားတယ္ဆိုတာကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီးမွသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ဆႏၵမဲေတြကို ေပးသင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ကတိကဝတ္ေတြကို ၎တို႔ရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ဒီမိုကေရစီအတြက္ အသက္တမွ်အေရးႀကီးလွတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ကာကြယ္ေပးဖို႔ ကတိကဝတ္ေတြေပးထားၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၁ ခုရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိကဝတ္ေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုးႏိုင္ဖို႔ tool တစ္ခုကို FEM က ဖန္တီးထားၿပီး၊ ကတိကဝတ္ေတြကို ၾကယ္ငါးပြင့္အထိ အဆင့္သတ္မွတ္ကာ ခြဲျခားေဖာ္ျပထ
Website URL: 835470413233216
Headline: ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအရာရှိတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ စစ်တပ်နဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေ အပါအဝင် သြဇာအာဏာရှိသူတွေအား ဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့ လူတွေကို တရားစွဲဆိုဖို့အတွက် အစိုးရရှေ့နေနဲ့ ရဲတွေက ပံ့ပိုးကူညီကြပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ မွေးရာပါအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို အသုံးပြုတဲ့ ဘယ်သူမဆို မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသရေဖျက်မှုဥပဒေတွေနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချခံရနိုင်တဲ့ ဥပဒေဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုကို တွေ့ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် FEM နဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၅၀ ကျော်က အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အဓိကဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အစိုးရအသစ်ကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားတဲ့ အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အဆိုပြုနည်းလမ်း ၄ ခုကို Micro-site ကနေတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ http://freeexpressionmyanmar.org/defamation/?fbclid=IwAR0XEllcT9_FQ4WeuZwZFA-KB66_E2KilDzwJ0CG22V-HuuzO7O-MCD5K2I
Powerful people, including public officials, politicians, religious leaders, military, and business leaders are supported by prosecutors and the police to bring suits against those who criticise them. Everyone who enjoys their inborn right to freedom of expression has got suchalegal threat imposed by the criminal defamation laws in Myanmar. That is why, FEM and 50 other CSOs urge the new government to prioritise on the defamation reform. See our4defamation reform proposals through this micro-site.
Headline: အသရေဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာစွပ်စွဲမှုတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ အပြုအမူဟာ ၄င်းတို့အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ဒီမိုကရေစီဆန်တယ်ဆိုတာကို ပြသတဲ့ အရေးပါတဲ့ အညွှန်းကိန်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာ သြဇာအာဏာကြီးသူတွေနဲ့ အစိုးရအား ဝေဖန်တဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေကို ဖိနှိပ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ ရှုပ်ထွေးပြီး၊မရေရာတဲ့ ရာဇဝတ်မှုဥပဒေမူဘောင်တွေကို ကိုင်စွဲထားကြပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာတော့ အန္တရာယ်ရှိပြီး၊ ထိခိုက်မှုရှိတဲ့ လိမ်ညာတာတွေကို တားဆီးဖို့အတွက်သာ ကျစ်လစ်တဲ့ တရားမမှုဥပဒေဆိုင်ရာ အခြေခံမူတွေ ရှိကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အသရေဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့ ၄င်းတို့ကို အသုံးပြုချက်တွေဟာ ဘယ်တစ်ခုကမျှ အခြေခံအကျဆုံး နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့တောင် ကိုက်ညီမှုမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် FEM နဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၅၀ ကျော်က အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အဓိကဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အစိုးရအသစ်ကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားတဲ့ အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အဆိုပြုနည်းလမ်း ၄ ခုကို Micro-site ကနေတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ http://freeexpressionmyanmar.org/defamation/?fbclid=IwAR0XEllcT9_FQ4WeuZwZFA-KB66_E2KilDzwJ0CG22V-HuuzO7O-MCD5K2I
The manner in which states deal with allegations of defamation is an important indicator of how democratic they are. Authoritarian states have vague and confusing criminal law frameworks intended to suppress criticism of the government and powerful people. Democratic states have narrow civil law frameworks intended to stop malicious and harmful lies. None of Myanmar’s defamation laws and their applications conform to even the most basic of international standards, and which directly weaken the democracy. FEM and 50 other CSOs urge the new government to prioritise on the defamati
Headline: သဘောထားအယူအဆတစ်ခုဆိုတာ တစ်စုံတစ်ရာအကြောင်း ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အမြင်တစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်။ အမြင်အယူအဆဆိုတာကတော့ တိကျသေချာမှုမှာ အားနည်းချက်ရှိတဲ့အပြင် အချက်အလက်နဲ့ အသိသညာအပေါ် အခြေခံဖို့လည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ သဘောထားအယူအဆတစ်ခုဟာ လွဲမှားကောင်းလွဲမှား နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အချက်အလက်အခိုင်အမာပြောဆိုခြင်း မဟုတ်တဲ့အတွက် အချက်အလက်မှားယွင်းတယ်လို့ သက်သေမပြနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အသရေဖျက်မှုမှာအမြင်သဘောထားအယူအဆတွေဟာ ပြည့်စုံတဲ့ ခုခံကာကွယ်မှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာ့ဥပဒေတွေရဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုကို ၂နှစ်ကြာ သုတေသန လုပ်ခဲ့တဲ့ FEM ရဲ့ သုတေသနမှာတော့ အစိုးရက အချက်အလက်အခိုင်အမာပြောတဲ့သူတွေထက် ၄င်းတို့ရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေကို ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသူတွေကို အပြစ်ပေးဖို့ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ အသရေဖျက်မှုဥပဒေတွေကို အသုံးပြုခဲ့တာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရသစ်အနေနဲ့ အသရေဖျက်မှုဥပဒေတွေကို ဦးစားပေးပြင်ဆင်ပေးသင့်ပါတယ်။။ အသရေဖျက်မှုဥပဒေတွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၅၀ ကျော်က အစိုးရကို ဘာတွေ အဆိုပြုထားလဲဆိုတာ သိရဖို့ Micro-site ကနေတစ်ဆင့် “အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အဆိုပြုချက်များ” အစီရင်ခံစာကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
An opinion isaview formed about something. It falls short of certainty and may not necessarily be based on fact or knowledge. An opinion may be misguided, but as it is not an assertion of fact, it cannot be proven false. Opinion is an absolute defense against defamation. However, according to FEM's research on the practices of Myanmar's law, the State usesacriminal defamation provision to punish the people for their opinion rather than facts. Therefore, the defamation laws should be reform
Headline: အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်တွေက NLD ရဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အဆုံးသတ်ရေးအပေါ် ပေးထားတဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို အရေးနိမ့်စေခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သြဇာအာဏာကြီးမားသူတွေက ၄င်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်အမှားတွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့အတွက် ထိုဥပဒေပြဌာန်းချက်တွေကို တစ်လွဲအသုံးချနိုင်ကြပြီး အလားအလာရှိတဲ့ လာဘ်စားမှုတွေအကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်လို့ပါ။ ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင် ယခင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတစ်ယောက်မှာ အကျင့်ပျက်ခြစားတဲ့အတွက် အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားရှင်းလင်းစွာ တွေ့ရသည့်တိုင်အောင် သူမအပေါ် သိက္ခာချရေးသားတယ်ဆိုပြီး မီဒီယာသမားကို အပြစ်ရှိတယ်လို့ ဆက်လက်တရားစွဲဆိုခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တကယ်လို့ NLD အစိုးရအနေနဲ့ ကတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်း အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေကို အဆုံးသတ်ဖို့ ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင် အသရေဖျက်မှုဥပဒေတွေကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်မှ လျော့ချပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသရေဖျက်မှုဥပဒေတွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၅၀ ကျော်က အစိုးရကို ဘာတွေ အဆိုပြုထားလဲဆိုတာ သိရဖို့ Micro-site ကနေတစ်ဆင့် “အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အဆိုပြုချက်များ” အစီရင်ခံစာကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ http://freeexpressionmyanmar.org/defamation/?fbclid=IwAR0XEllcT9_FQ4WeuZwZFA-KB66_E2KilDzwJ0CG22V-HuuzO7O-MCD5K2I
The defamation provisions have let NLD's commitment on ending corruption failed because the powerful people can misuse those laws to hide their wrong-doings and punish HRDs and journalists who raise about the potential corruptions. There was an example that the media professional was still found guilty of libelling former chief minister though she was clearly found guilty of the corruption. If the NLD government have the serious will to end the corruption as prom
Headline: အသရေဖျက်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေတွေ အများကြီးရှိနေတာက မလိုအပ်ဘဲ ဥပဒေဖောင်းပွနေတာသာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာဥပဒေအရလည်း မကိုက်ညီပါဘူး။ မကြာသေးမီက ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ “နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေး” ဥပဒေ ကဲ့သို့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အပြုသဘောဆောင်သက်ရောက်မှုတွေကို ယုတ်လျော့စေပါတယ်။ အစိုးရအာဏာပိုင်တွေနဲ့ အရှိန်အဝါရှိသူတွေက လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ သတင်းမီဒီယာသမားတွေကို ၄င်းတို့အား ဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့အခါ ဖိနှိပ်ဖို့အတွက် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ အသရေဖျက်မှုပြဌာန်းချက်တွေ အများကြီး ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အသရေဖျက်မှုဥပဒေတွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၅၀ ကျော်က အစိုးရကို ဘာတွေ အဆိုပြုထားလဲဆိုတာ သိရဖို့ Micro-site ကနေတစ်ဆင့် “အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အဆိုပြုချက်များ” အစီရင်ခံစာကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
Having so many law on defamation is unnecessary duplication and is not in line with international law. It also undermines the potential positive impact of the recent privacy law amendment. There are still many criminal defamation provisions which government authorities and powerful people can freely choose to oppress HRDs and jouranalists for criticising against them. See the defamation refrom proposals through this micro-site to know what more than 50 CSOs propose the government to bring the defamation reform.
Headline: မြန်မာ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများ လက်စွဲ - မြန်မာနိုင်ငံရှိ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်
(Legal right to protest in Myanmar)
သင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆန္ဒပြခွင့်ရှိသည်။
ဆန္ဒပြခွင့်တွင် အောက်ပါ အခွင့်အရေးများလည်း ပါဝင်သည် -
• လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် တရားမျှတမှု ရပိုင်ခွင့် (ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၆(င))
• လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် (ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၅၄(က))
• လွတ်လပ်စွာ စုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် (ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၅၄(ခ)။ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃(က))
• မိမိ၏ အနုပညာနှင့် ယဥ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ပျိုးထောင်ပိုင်ခွင့် (ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၆၅)
• လွတ်လပ်စွာ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခွင့် (ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၃၉)
• ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင် ဥပဒေ၏အကာအကွယ် ရပိုင်ခွင့် (ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်း လှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃(က))
Download မြန်မာ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများ လက်စွဲ (PDF) >> http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2021/02/myanmar-protesters-toolkit.pdf
#Myanmar #MyanmarCoup #RightToProtest
Headline: မြန်မာ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများ လက်စွဲ - စွဲချက်တင်ချိန်နှင့် အမှုကြားနာစစ်ဆေးစဥ် ကာလအတွင်း သင်၏ရပိုင်ခွင့်များ (Your protest rights when charged and in trial)
ဆန္ဒပြသူများအတွက် ဥပဒေဆိုင်ရာ အကာကွယ်နဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေအကြောင်းရေးသားပြုစုထားတဲ့Myanmar protest toolkit ပါ။ စစ်အာဏာရူးတွေအောက်မှာ ဥပဒေဟာ အသုံးဝင်ပါဦးမလား တိတိပပ မပြောနိုင်ပေမယ့် တကယ်လို့ အသုံးလိုသူတွေ ရှိရင် ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူလို့ရအောင် Launch လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ပြည်သူတွေ အရင်ရက်တွေကထက် ပိုမိုဝန်းရံကြဖို့လိုပါတယ်။
အများပြည်သူအားလုံးလုံခြုံစွာနဲ့ ပြည်သူ့ အာဏာကို ပြည်သူ့ထံ အောင်မြင်စွာ ပြန်လည်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ကြပါစေ။
သင်သည် တရားဥပဒေအရ ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ (ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၁၉ နှင့် ၃၇၅။ ပြည်ထောင်စု တရားစီရင်ရေး ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃)။
သင့်အား မည်သည့်ပြစ်မှုနှင့် စွဲချက်တင်ထားသည်ကို သင် သိပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ (ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၂၁၀။ နိုင်ငံတကာ ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (ICCPR) ပုဒ်မ ၉(၂))။
သင်သည် တိုင်တန်းသူ(တရားလို)နှင့် တန်းတူ အမှု ကြားနာစစ်ဆေးခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်သည် အသိသက်သေ ခေါ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ (မောင်အံ့ဘွယ် နှင့် တစ်ဦး၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၊ ၁၉၄၈ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးများ (ဗဟိုတရားရုံးချုပ်) ၈၆၃။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ နှင့် အရှင် + ၂ ဦး၊ ၁၉၅၅ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးများ ၃၁၇)။
သင်သည် တစ်ဖက်မှသက်သေများ (တရားလိုဘက်သက်သေများ) ကိုလည်း ပြန်လှန်စစ်မေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၂၀၈ (၂))။
သင်သည် တရားရုံး၏ လေးစားစွာဆက်ဆံမှုကို ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (တရားရုံးများလက်စွဲ အပိုဒ် ၁၃)။
သင်သည် ခုခံချေပရန်အတွက် ရှေ့နေ ငှားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၄၀၊ တရားရုံးများ လက်စွဲ အတွဲ ၂၊ အပိုဒ် ၄၅၅။ တရားဥပဒေဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေး ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၂၅-၂၆၊ ၃၁ နှင့် ၄၃၊ နိုင်ငံတကာ ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (ICCPR)၊ အပိုဒ် ၁၄(၃)(ဃ))။
Headline: Free speech is under attack in Myanmar. Freedom of Expression includes the right to seek, receive and impart information. We are Local Non-Profit Organization, promoting the Right to Freedom of Expression and Information in Myanmar.
ငြိမ်းစုစီဥပဒေကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့သော်လည်း ရဲများသည် အသိပေးအကြောင်းကြားစာကို ဆန္ဒပြရန် ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံလွှာဟု သတ်မှတ်နေပါသေးသည်။ ၇၂ % သော ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများသည် ရဲများသည် အသိပေးစာကို ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံလွှာဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်နေကြသည်။ ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ မှ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဆန္ဒပြမှုကြောင့် တရားစွဲဆိုခံရသူ ၂၂၉ ဦးထိ ရှိခဲ့သည်။ ၄င်းတို့အနက် အယောက် ၅၀ ကို FEM က အသေးစိတ် မေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစီရင်ခံစာ၏ ရလဒ်များနှင့် ကိန်ဂဏန်းဖော်ပြချက်များကို အောက်ပါ လင့်(ခ်)တွင် အသေးစိတ် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။ http://freeexpressionmyanmar.org/no-permission-to-protest/ “ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့် မပြု” အစီရင်ခံစာ ကာတွန်းအမှတ် ၂/၁၂ ......... Although the PAPP Law was amended in 2016, most police still regard notification forms as an application for permission to protest. 72% of protesters believed that the police treated their notifications as applications for permission to protest.  protesters were criminally charged in Myanmar between October,2016 and January,2020. FEM interviewed over 50 of them and you can download these stats and all the results (in PDF) here: http://freeexpressionmyanmar.org/no-permission-to-protest/ (Note: The protester in the cartoon is explaining to the police officer that permission is no longer needed.) "No permission to protest" Cartoon2of 12. #Myanmar #FreeSpeech #NoPermissionToProtest #Justice #RuleOfLaw #FreedomOfExpression #DigitalRightMM #FreedomOfAssembly #FreedomOfAssociation